Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Nolosha Cusub ee Bluefields Westmoreland Jamaica
Boostada martida • Jamaica News Breaking
Bilawga horraanta Noofambar 2021, hindisaha tartanka waddada ugu Wanaagsan ee Bluefields, kaas oo ah maskaxdii Keith R. Wedderburn ee Beerta Dabiiciga ah ee Bluefields, ayaa u dabaaldegi doonta oo aqoonsan doonta shaqada adag iyo hal-abuurka ay dad badan oo deggani galiyeen sidii ay deegaankooda uga dhigi lahaayeen meel qurux badan noolow.
Abaalmarinada waxaa loogu talagalay dhiirigelinta hanka bulshada ee deegaankooda, dhiirigelinta dhaqamada deegaanka u saaxiibka ah, kordhinta wacyiga deegaanka, iyo abaal marinta dadka ilaaliya jidadkooda.
Dadka deegaanka waxay si wadajir ah ama si gaar ah u geli doonaan waddo, ka dib garsoorayaasha waxaa loo xilsaari doonaa inay helaan waddada ugu habboon:
1. Abaalmarinta ugu Aragga Fiican 2. Abaalmarinta Beerta hore ee ugu soo jiidashada badan 3. Abaalmarinta Dhaqanka Dib u warshadaynta ee ugu Fiican 4. Abaalmarinta Kahortaga Qashinka Wadooyinka ee ugu Wanaagsan iyo 5. Dhalinyarada ku jirta Abaalmarinta Waddada ugu Wanaagsan.
Magaalada Bluefields waxaa la aasaasay 1519. Annotto Bay iyo Sevilla La Nueva ama New Seville waa laba magaalo oo ka horreeyay Bluefields. Henry Morgan Buccaneer, Captain Blight (wuxuu keenay rootiga iyo ackee jasiiradda), iyo Henry Gosse, oo ah qoraa caan ah oo ku saabsan shimbiraha Galbeedka Hindiya, dhammaantood waxay ku sugnaayeen Bluefields. Waxa kale oo jiray beero dhawr ah oo hadhaagii beerihii Bluefields iyo Shafton ay wali taagan yihiin maanta. Ilaa hadda xubnaha bulshada ayaa aad ugu riyaaqay mashruuca la soo jeediyay. Guddi hagitaan ayaa la sameeyay si ay u maareeyaan mashruuca uu hogaamiyo Keith Wedderburn waxayna mar hore ka heleen taageero kafaalo qaad ah iyo ballanqaad xubnaha qoyska Bluefields ee ku nool dibada.
Marka uu tartanku bilaabmo, waxa ay filayaan isbeddel dhammaystiran. Marka lagu daro nadiifinta, qurxinta iyo dayactirka goobaha, natiijooyinka la filayo ayaa badan. Tusaale ahaan, Qashinka waxaa loo maarayn doonaa si xilkasnimo leh oo horay loogu socdo, waa in aan mar dambe la gubin qashinka ama daadinta sharci darrada ah. Ka qaybgalayaasha waxa lagu dhiirigelinayaa inay ka qaybqaataan aqoon-is-weydaarsiyada la xidhiidha maaraynta qashinka adag iyo samaynta bacriminta taasoo keeni doonta inay bartaan sida loo kala saaro qashinka oo ay bilaabaan isticmaalka walxaha dabiiciga ah ee qashinka. Sidoo kale, qashinka la ururiyo lagama tagi doono. Si loo wanaajiyo maareynta qashinka, mas'uuliyiinta ay khuseyso waxaa looga baahan doonaa inay soo ururiyaan agabka qashinka sida caagagga, dhalooyinka dhalada ah, faylasha aluminiumka iwm waqtiyo u dhexeeya waddo kasta. 2 Jawaabaha qaarkood ilaa hadda waa: "Fikrad wanaagsan oo aan ku taageerno mid ka mid ah Tuulooyinka Qaabka Waddan sida mashaariicda ganacsiga oo ku siin doona taageero iyo macluumaad sidoo kale" - Diana McIntyre Pike, La-taliyaha Horumarinta Dalxiiska Bulshada "Waan soo dhaweynayaa fikradda sababtoo ah waxay sameyn doontaa dadka ka tirsan bulshadu waxay leeyihiin dareen ay ku hanweyn yihiin halka ay ku nool yihiin, iyagoo leh dhiirigelin ay ku raacaan. Ballanqaadkayga waan ku siinayaa, waan ku taageeri doonaa.” – Ralva Ellison, xubin ka ah bulshada Belmont, oo hadda ku nool dibadda. "Waxay u muuqataa mid wanaagsan iyo hindise aad u wanaagsan." Ayuu yidhi Sarreeye Berry oo ka tirsan Saldhigga Bileyska Bluefields.
"Fikradaha xigmadda leh. Waxa aan raacayaa in aan wax ku darsado markasta oo loo baahdo”, ayuu yidhi Robblin Wedderburn, oo hore u degenaa Belmont iyo Ku Xigeenka Kormeeraha Guud ee Bilayska ee hawlgabka ah oo hadda ku nool Maraykanka “Hindise Wacan. Ku dhis agagaarka dhalinyarada si ay u waarto mustaqbalka fog. Ayuu yidhi Wolde Kristos, Horumarinta Bulshada, deganna Belmont “Fikrad weyn. Waxaan aaminsanahay in wax sidan oo kale ah ay u wanaagsanaan doonto bulshada." – Nickeisha Robinson, degane Belmont “Fiican… Haddi ay suurtogal tahay, si naxariis leh iigu soo dir soo jeedin ciwaanka iimaylkayga. Waxaan xaqiiqdii ka heli doonaa wax iibsi ah Shirkadda Dawladda Hoose ee Westmoreland" -
Michael Jackson "Waan ku faraxsanahay inaan kula wadaagno. Waxaan bixineynaa habeen bilaash ah oo abaalmarin ah." – Linda Cheddister (Luna Seas Hotel) “Waxay u egtahay mashruuc wanaagsan. Waan ku farxi doonaa inaan garsoore ka noqdo mashruucan. Fadlan i sii macluumaad dheeraad ah" - Barrington Taylor (Mashruucyada Biyo-mareenka ah ee NEPA) "Waad ku mahadsan tahay inaad la soo xiriirto. Xor baad u tahay inaad iimayl iigu soo dirto macluumaadka kor ku xusan iyo wixii tafaasiil dheeraad ah" - Rochelle Forbes (Maareeyaha Sandal South Coast PR). Sida laga soo xigtay Guddoomiyaha Guddiga Hoggaaminta Tartanka Bulshada ee Bluefields, “Tani suurtagal ma noqon doonto haddii aan kooxdayada tabaruceyaasha ah ee heeganka ah aan ka shaqaynayn daaha gadaashiisa. Kuwaas waxaa ka mid ah Mr André James, Mrs Alrica Whyte-Smith, Ms Tracey Edwards, Mrs Diana McIntyre-Pike, Ms Tracey Spence, Mr Charles O. Wilkinson aka Sir W One, Ms Alison Massa, Ms Adrianna Parchment iyo Mr Kelon Wedderburn. Waxaan u mahadcelineynaa kafaala-qaadayaashayada, asxaabta, iyo qoysaska beelaha. Waxaan sidoo kale jeclaan lahayn inaan fursadan uga faa'ideyno inaan ku dhiirigelinno kuwa kale ee ka socda aaggan, oo laga yaabo inay maqan yihiin, inay yimaadaan markabka.
Waqtigii aad gacmaha is qabsan lahayd oo aad gacan ka geysan lahaydeen kor u qaadida jidkaaga gaarka ah hadda waa! Tani waxay noqon doontaa goobtaada quruxda badan ee Jamaican si aad u sugto, soo laabashadaada. Dhammaan deeqaha waxaa loo isticmaali doonaa abaal-marinnada iyo in lagu caawiyo ka-qaybgalayaasha diyaarinta, haddii ay suurtagal tahay. Mashruucani waxa uu dhiirigelin doonaa ka qaybgalayaasha ficilada kale ee wanaagsan, waxa kale oo si fudud looga qaadan karaa meelaha kale ee Jamaica oo ay noqoto mid horseeda isbedelada bulshooyinka.